Nakhshad-dhiirrigeliyaha badmareenka dugsiga Tattoo
Susana Garcia | | Tattoos, Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos'
El adduunka baddu waxay leedahay dhiirigelin weyn Tattoos, marka waxaa jira mowduucyo badan oo suurtagal ah oo aan ka heli karno tattoo. Xaqiiqdii, badmaaxyaashu waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee xarago. Maanta waxaa jira waxyaabo badan oo qaab dhismeed duug ah loo yaqaan 'skatt tattoos', nooc ka mid ah astaamaha lagu yaqaan 'classic'
Waan arki doonaa qaar ka mid ah waxyaabihii dugsiga lagu dhiiri galiyay dhiirrigelinta badda. Waxaa jira mawduucyo soo noqnoqonaya, sida barroosimmada, laydhka, doomaha ama meerisyada. Xaqiiqdii waa qaab weyn oo bixiya midab badan iyo dhiirigelin.
1 Tilmaamaha Mermaids
2 Tattoo doon
3 Tattoo leh nalka hore ee guriga
4 Tattooga badmaaxiinta dugsiga hore
5 Tattoo tattoo
ka Mermaids waa cunsur caan ka ah adduunka badmaaxiinta. Waa dad suufi ah oo ku jira badda moolkeeda oo inbadan loo adeegsado astaamaha. Iyagu waa haween nus ah oo had iyo jeer naftooda dib ayey u qurxiyaan aad u qurux badan, maadaama ay iyagu yihiin kuwa soo jiita badmaaxiinta.
Waxaa jira astaamo badan oo dugsiga lagu daabaco oo indhaha soo jiita waana kuwan la yaab. The doomaha waa weyn yihiin sidaas darteedna waxay u garaacayaan tattoos. Dugsiyadan hore ee tautajes faahfaahinta kale ayaa sidoo kale lagu daray sida ubaxyo waaweyn iyo barroosinnooyin. Liqitaannada sidoo kale waa faahfaahin lagu daro tattoos.
Tattoo leh nalka hore ee guriga
Tattoo-ka qaabkani wuxuu leeyahay midab badan, sidaa darteed waxaan ku aragnaa codad badan oo xoog leh sida midabka cas ee ku jira Tattoo shubeetiga hore. Guryaha laydhku waxay astaan ​​u yihiin oo keliya dunida badda, laakiin sidoo kale iftiinka laga sameeyay mugdiga, hage xilliyada mugdiga ah. Marka waxaan u aragnaa astaamahaan inay yihiin faahfaahin wanaagsan oo leh codad casaan ah oo badda lagu dejiyey.
Tattooga badmaaxiinta dugsiga hore
ka Tattoo badmaaxiinta sidoo kale waxay leeyihiin waxyi kale oo badan. Waxaan ka helnay qaar ka mid ah haweenka badmaaxiinta ah qaabka iskuulka ugu da'da wanaagsan. Midabbada casaanka iyo buluugga ah, oo ubaxyo ahaan looxyo ah, xarig iyo badda gadaal u ah waxay noqon karaan fikrado waaweyn oo lagu daro tattoo-ga.
ka barroosinnadii oo ku yaal qaabkii hore ee dugsiga sidoo kale wax badan ayey u muuqdaan, sida faahfaahin lagu daro kaligeed ama fikrado kale. Xaaladdan oo kale, barroosinnadu waxay leeyihiin faahfaahin qurux badan oo midabo leh waxayna astaan ​​u yihiin waxa aan ku dheggan nahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoo dugsiga-jir-ku-dhiirrigeliyay
Tattoo guitar, loogu talagalay kuwa jecel muusikada runta ah
Tattoo xayawaan yaryar, qashin khayaali ah